4 imibongo emnandi ngoLwesihlanu oLungileyo. Ongaziwayo, uLope, uMachado kunye noMistral | Uncwadi lwangoku
Ngeveki yePasika. Iiholide, iiholide, ii-torrijas kunye ne-stews, iindwendwe kunye nolwandle, ukholo kunye nokholo oluncinci. Y iintsuku zokufunda. Lo msantsa siphinde sawufumana ukuze sithathe incwadi oyifunayo okanye siphinde sifunde ezinye. Ndiya ekhaya kwezi ntsuku kwaye ndihlala ndithatha ithuba lokutshintsha ezo zifundo. Ke ndifumene ImibongoIntsomi Iivesi ezingama-25.000 ezilungileyo zolwimi lwaseSpain.
Omnye Uhlelo luka-1963, kunye neReaders 'Circle, ababebhalise kuyo abazali bam. Ithuba lenze oko, xa ndiyivulayo, ndadibana naloo nto Sonnet kuYesu obethelelwe emnqamlezweni yesiqalo esihle kangaka. Ngoko beze kum imibongo emine ngubani obhale ii-greats ezine -oko Ongaziwayo, uLope de Vega, u-Antonio Machado kunye no-Gabriela Mistral-. Abakholwayo nabangakholwayo. Yabo bonke. Masizifunde nje kwaye sonwabele ubuhle bazo.
1 I-Sonnet kuYesu obethelelwe emnqamlezweni - engaziwa (ngekhulu le-XNUMX)
2 Yintoni endinayo efuna ubuhlobo bam? -Lope de Vega (1562-1635)
3 I-saeta- uAntonio Machado (1875-1939)
4 Ubusuku - uGabriela Mistral (1889-1957)
Sonnet kuYesu obethelelwe emnqamlezweni -Angaziwa (inkulungwane ye-XNUMX)
Akundishukumisi, Thixo wam, ukuba ndikuthande
isibhakabhaka osithembise sona,
nesihogo asindishukumisi esoyikwa
Uyandihambisa, Nkosi, ndihambise ndikubone
ubethelelwe emnqamlezweni kwaye ugculelwa,
ndishukumise ukuze ndibone umzimba wakho wonzakele,
Ndishukunyiswe ngabahlobo bakho kunye nokufa kwakho.
Ndishukumise, ngamafutshane, uthando lwakho, kwaye ngendlela,
ukuba nokuba alikho izulu, ndingakuthanda,
Nokuba bekungekho sihogo, bendiya koyika.
Akunyanzelekanga ukuba undinike kuba ndikuthanda
Ewe, nangona into endinethemba layo ingazukulinda,
ngendlela endikuthanda ngayo, ndingakuthanda.
Yintoni endinayo efuna ubuhlobo bam? -Lope de Vega (1562-1635)
Yintoni endinayo efuna ubuhlobo bam?
Unomdla onjani owulandelayo, Yesu wam,
ukuba emnyango wam ugqunywe ngumbethe
Ngaba uyabachitha ubusuku obumnyama bobusika?
Oo kwakunzima kangakanani ngaphakathi kwam,
Ewe, khange ndiyivule! Olunjani udida,
ukuba umkhenkce obandayo wokungabuleli kwam
zomile izilonda zezityalo zakho ezinyulu!
Zindixelele kangaphi iingelosi?
«Alma, ngoku ungqiyame ngefestile,
Uya kubona ngothando oluninzi ukubiza ukuzingisa »!
Kwaye bangaphi, ubuhle bobukhosi,
Uphendule wathi: "Ngomso siza kuyivula."
ngempendulo efanayo ngomso!
Utolo UAntonio Machado (1875-1939)
Owu utolo, ukucula
Ndihlala ndinegazi ezandleni zam,
Cula ngabantu baseAndalusi,
ukuba yonke intwasahlobo
Cula ngomhlaba wam,
kwaye lukholo lwabadala bam!
Andikwazi kucula, kwaye andifuni
kodwa lowo wahamba elwandle!
Busuku -UGabriela Mistral (1889-1957)
Ubawo wethu oseZulwini,
Usikhumbule isiqhamo ngoFebruwari,
xa i-ruby pulp yayo iba buhlungu.
Icala lam livulekile,
kwaye awufuni ukujonga kum!
Ukhumbule iqela elimnyama
yaza yanika isixovulelo sewayini sangqombela;
kwaye wahlula amahlamvu ompopuri,
ngomphefumlo wakho, emoyeni ochuliweyo.
Kwaye kwisixovulelo esibanzi sewayini sokufa
awukafuni ukundicinezela isifuba sam!
Ukuhamba ndabona i-violets zivulekile;
Ndayisela ifalerno yomoya,
ndathoba, tyheli, iinkophe zam,
ngokungaboni ngakumbi ngoJanuwari okanye ngo-Epreli.
Kwaye ndiwuqinisile umlomo wam, ndakhukula
yesitanza ekungafuneki ukuba ndisikhame.
Ulibethe ilifu lasekwindla
kwaye ufuna ukubuyela kum!
Lowo wandanga esidleleni wandithengisa;
Undiphikile ngenxa yengubo yentsimbi.
Iivesi zam zijongana negazi,
njengawe kwilaphu, ndamnika,
nasebusuku egadini yam, bebendim
UCoward John kunye neNgelosi enobutshaba.
Ukudinwa okungapheliyo kufike
ukujonga emehlweni am, ekugqibeleni:
ukudinwa kosuku afe
nolunye lokusa olufanele ukufika;
Ukudinwa kwesibhakabhaka setoti
kunye nokudinwa kwesibhakabhaka se-indigo!
Ngoku ndilahla imbadada yomfeli-nkolo
nee braids zicela ukulala.
Kwaye ndilahlekile ebusuku, ndivuka
isikhalo esifundwe kuwe:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » Imibongo » 4 imibongo emnandi ngoLwesihlanu oLungileyo. Ongaziwayo, uLope, uMachado kunye noMistral
Ngaba uyayazi inkonzo yasimahla ye-imeyile 'Bookflash'?